Fiheveran’Andriamanitra ny Herisetra | Inona no Lazain’ny Baiboly?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nanjaka foana ny herisetra hatramin’izay. Hitohy mandrakizay ve izany?
Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny herisetra?
Olona maro, anisan’izany ny mpivavaka, no mihevitra fa azo atao ny mampiasa herisetra rehefa misy mampahatezitra. Tsy mampaninona ny olona an-tapitrisany koa ny mijery fandaharana na filma misy herisetra ao amin’ny tele.
Any akaikin’i Mossoul, any amin’ny faritra avaratr’i Irak, no misy ny sisa tavela amin’i Ninive. Tanàna lehibe izy io fahiny sady renivohitry ny Fanjakana Asyrianina. Na dia nandroso be aza io tanàna io, dia nilaza mialoha Andriamanitra fa “hataony tsy misy mponina” izy io. (Zefania 2:13) ‘Hataony higagan’ny olona’ i Ninive satria “tanàna mpandatsa-dra.” (Nahoma 1:1; 3:1, 6) “Halan’i Jehovah” mantsy “ny mpandatsa-dra”, araka ny Salamo 5:6. Nitana ny teniny tokoa izy, satria tsy nisy niangana ilay tanàna.
Avy amin’i Satana Devoly, ilay fahavalon’Andriamanitra sy ny olombelona, ny herisetra. Nantsoin’i Jesosy Kristy hoe “mpamono olona” i Satana. (Jaona 8:44) Hita amin’ny toe-tsain’ny olona ny toetran’i Satana, anisan’izany ny hoe adalana herisetra. ‘Eo ambany fahefan’ilay ratsy [mantsy] izao tontolo izao manontolo.’ (1 Jaona 5:19) Raha te hampifaly an’Andriamanitra àry isika, dia tokony ho tia izay zavatra tiany ary hankahala herisetra. * Azo atao ve izany?
‘Tena halan’i Jehovah ny olona tia herisetra.’—Salamo 11:5.
Afaka miova ve ny olona mahery setra?
Toetra efa raiki-tampisaka ao amin’ny olona ny hoe mahery setra, ka tsy azo ovana intsony.
‘Esory aminareo ireto: Fahatezerana, fahavinirana, faharatsiana, fanevatevana, ary resaka vetaveta. Esory ny toetra taloha mbamin’ireo fanao niaraka taminy, ary tafio ny toetra vaovao.’ (Kolosianina 3:8-10) Mitaky be loatra ve Andriamanitra? Tsia, satria afaka miova ny olona. * Amin’ny fomba ahoana?
Voalohany, ilaina ny mahalala tsara an’ Andriamanitra. (Kolosianina 3:10) Rehefa mianatra momba ny toetran’ny Mpamorona sy ny fitsipiny mantsy ny olona iray, dia lasa tia an’Andriamanitra sady te hampifaly azy.—1 Jaona 5:3.
Faharoa, ilaina ny mahay mifidy namana. Hoy ny Ohabolana 22:24, 25: “Aza minamana amin’ny olona mora tezitra, ary aza mifanerasera amin’ny olona mora misafoaka, sao ianao hanao toy izany koa ka ho fandrika ho anao izany.”
Fahatelo, fantaro ny tena marina. Ho hita hoe kanosa sy tsy mahafehy tena ianao raha mora mikasi-tanana. Ny olona tia fihavanana kosa no azo lazaina ho be herim-po. Hoy ny Ohabolana 16:32: “Aleo olona tsy mora tezitra toy izay lehilahy matanjaka.”
“Ataovy izay hihavananareo amin’ny olon-drehetra.”—Hebreo 12:14.
Mbola hifarana ve ny herisetra?
Efa nisy foana ny herisetra ary mbola hisy foana.
‘Rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy intsony ny ratsy fanahy. Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.’ (Salamo 37:10, 11) Hanavotra an’ireo mpandefitra sy tia fihavanana Andriamanitra ka handringana an’ireo tia herisetra, toy ny nataony tamin’ny mponin’i Ninive. Tsy hisy intsony ny herisetra amin’izay.—Salamo 72:7.
‘Ny malemy fanahy no handova ny tany.’—Matio 5:5
Miezaha àry ho tia fihavanana raha te hampifaly an’Andriamanitra. Hoy ny 2 Petera 3:9: ‘Manam-paharetana aminareo i Jehovah, satria tsy tiany hisy ho ringana fa mba ho tonga amin’ny fibebahana kosa ny rehetra.’
“Hanefy ny sabany ho angadinomby izy ireo, ary ny lefony ho antsy fandrantsanam-boaloboka.”—Isaia 2:4.
^ feh. 7 Marina fa navelan’Andriamanitra hiady ny Israely fahiny mba hiarovany ny faritaniny. (2 Tantara 20:15, 17) Niova anefa izany rehefa tsy nanao fifanekena tamin’ny Israely intsony Andriamanitra, ary nanangana ny fiangonana kristianina.
^ feh. 11 Misy tantaran’olona nanova ny fomba fiainany ao amin’ilay andian-dahatsoratra hoe “Manova Olona ny Baiboly”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana.
Afaka miova ve ny olona mpamono vady rehefa mampihatra ny toro lalan’ny Baiboly?